KHAD DEGDEH AH KAALMEEYN SHARCI NACEYBKA ISLAAMKA
La talin sharci bilaash oo qarsoodi ah haddii aad dareensan tahay in lagu takooray, kadeeday, ama ku soo wajahay rabshado maxaa yeelay, waxaad tahay Muslim ama qof lo maleeye Muslim
Wac: (604) 343-3828
Waa maxay Islaam Naceybka?
Ma lagula dhaqmay si duwan ama si xun sababtoo ah waxaad tahay Muslim ama qof loo maleeyo Muslim? Islaam naceybku waxaa lagu dareemi karaa si badan oo kala duwan. Kuwani waa tusaalooyin qaar ka mid ah:
Haddii aad la kulantay ama goob joog u aheyd Naceyb Islaam, wac nambarkeena oo aad ka heli kartid caawimaad iyo macluumaad.
Waxaan nahay koox qareeno iyo ururada sharciga ah ee Vancouver kuwaas oo isu yimaadeen si ay u siiyaan taageeradooda Muslimiinta ama kuwa lo maleeyo Muslimiin ee BC kuwaasoo ay kudhacde ama ku dhici karto takoorka iyo weeraro. Waxaan rabnaa in kuwa ay soo gaartay noocyada kala duwan ee takoor ah sababta oo ah iimaankooda iyo / ama asalka jinsiyadeed inay ogaadaan in ay jiraan qareeno ee BC kuwaaso ka go’antahay in ay kaa caawiyaan hawsha adag ee la tiigsiga sharciga shaqsiyada ku kaca falalkaas in lagu xisaabiyo hay’adaheena sharciga.
Access Probono ayaa hergalisa khad degdeg ah oo lacag la’aan ah oo ay dadku soo wici karaan si qarsoodi si ay oo gala hadlaan qareen arrimo ku saabsan sheegashada takoorka ama denbiyada nacaybka. Waxaan kalo diiwaangelineenaa, iyada oonan la siideyneenin macluumaadka aqoonsiga, arrimaha lagu sheegay khadkaan.